Ny lalana sarotra, izao tontolo izao maneran-tany Switzerland Switzerland (WKG)
Inona no ataontsika raha tsy mahita ny lalantsika isika? Tsy azo atao angamba ny mandalo fiainana tsy misy ahiahy sy olana misy eo amin'ny fiainana. Sarotra zakaina ireny indraindray. Toa tsy marim-pototra ihany ny fiainana. Fa maninona? Tianay ho fantatra izany. Malahelo isika noho ny tsy nahitana ary manontany tena isika ny dikan'izany. Na dia tsy zava-baovao aza izany, ny tantaran'ny olombelona dia feno fitarainana, saingy tsy azo atao ny mahatsapa izany rehetra izany amin'izao fotoana izao. Fa raha tsy ampy fahalalana isika dia omen'Andriamanitra zavatra antsointsika hoe finoana. Manam-pinoana isika raha tsy mahita fijery sy fahatakarana feno. Rehefa manome finoana antsika Andriamanitra dia mandroso amin'ny fahatokiana isika, na dia tsy afaka mahita aza isika na mahatakatra na mahatakatra ny fomba handrosoana.